कृष्णलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली ! [निबन्ध] – Chitwan Post
कृष्णलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली ! [निबन्ध]
बिहानै कृष्ण हमालको तस्बिरमा फूल–अबिर चढाउन मलाई बर्कतले होइन भावनाले उनको घरमा पु¥यायो । प्लेजर स्कुुटी चढेर ४० मिनेटमा म त्यहाँ पुुगेर त्यति नै समयमा भरतपुुर फर्किएँ । स्कुटीको पदचिन्ह बुद्धचोक, डवकाघोल, चोकबजार र गीतानगरमा छोड्दै र आफ्नो दृष्टिविन्दुको झल्को रामचन्द्र, चेतकान्त र कृष्णराजका घरहरुमा पार्दै त्यहाँसम्म पुुग्दा मेरो मनको वनमा अतीत खुब मडारिएर आयो ।
१३ किलोमिटरको मेरो बाटो उहिलेको जस्तो माटो र गिटीमिश्रित थिएन, त्यो माटैमाटोको गोरेटो बाटो पनि थिएन, त्यो त कालो, चिप्लो, सफा र सुन्दर थियो । चोकबजारमा एकैछिन रोकिँदा बाटोको किनारमा मैले एउटा सियो देखेँ ।
कृष्णको चम्पानगर घरवरै म रोकिएँ । त्यस्तो विन्दुमा म रोकिएँ जहाँ मेरा बा श्रीनाथ रेग्मी, उहाँका छिमेकी भाष्कर देवकोटा, चेतभक्त प्रसाईं र रेवतीरमण घिमिरेका ४–४ बिघाका वर्गाकार ४ प्लटहरुका टुँडाहरु एकै ठाउँमा जोडिएका थिए । असार महिनाको अन्तिम अन्तिम दिनहरुमा यी ४ जना बाहरु हातहातमा कोदाली समाएर साझा सिमानामा उभिएर आआफ्ना खेताला÷खेतालीहरु गणना गर्नुहुन्थ्यो र त्यसदिन रोपेर भ्याइने गह्राहरु देखाउनुहुन्थ्यो । एकछिन उभिएर आँखा चिम्म गर्दा अघिल्तिर उहाँहरु ठिङ्ग उभिनुभयो खाली खुुट्टा र मेरा आँखा उघ्रिँदा उहाँहरु बिलाउनुभयो ।
चेतभक्त बा र मेरो खेत आलीले छुट्टयाएको थियो । प्रत्येक वर्ष साँधको आली लगाउँदा कतिपय ठाउँमा विवाद हुन्थ्यो, तर भक्तबा र मेरा बा दुवैतिर नमिचियोस् भनेर सल्लाह गरी आली लगाउनुहुन्थ्यो । आवश्यक ठाउँमा समाहा राख्नुहुन्थ्यो र पानीको प्राकृतिक प्रवाहलाई खुला छोड्नुहुन्थ्यो ।
ती दिन म आली लगाउने र कृष्ण बीउ पाँज्ने उमेरका थियौँ । उनी बीउको मुठो मेरो गह्रातिर म भएतिर फ्याँकेर मलाई जिस्क्याउँथे । म त्यो बीउको मुठोलाई उनी भएतिर फ्याँक्थेँ । पानीको छल्कोले उनको जाँगे भिज्थ्यो । चेतभक्तबा बाउसे गर्दागर्दैै ठिङ्ग उभिएर भन्नुहुन्थ्यो– ‘साइँला ! दाइलाई बीउले नहिर्का ।’
दाहीँ हाल्दा हामी आलोपालो गथ्र्यौं । बाहरु धान चुट्नुहुन्थ्यो, म र रणबहादुर मुठा छिरल्थ्यौँ, आमाहरु भात पकाउनुहुन्थ्यो, कृष्ण गोरू धपाउँथे । हाम्रो घरमा जाँतो नभएकोले बा कृष्णको घरमा मकै पिस्न जानुुहुन्थ्यो ।
२०२० सालमा जन्मिएका कृष्णसँग सन्दिपा दाम्पत्य जीवनमा बाँधिइन्, तर आज यति चाँडै उनले वैधव्यको खाडलमा खस्नुप¥यो ।
प्रारम्भमा उनले अर्बुदलाई थकाएका हुन्, तर आखिरमा उसले जित्यो । उसले जिते पनि कहीँकतै विजयोत्सवहरुको आयोजना भएन ।
विज्ञानले उसलाई घचेटेर डिलसम्म पुु¥याए पनि त्यहाँबाट तल खसाल्न सकेको छैन । अझ यो कोरोनाको विश्व महामारीमा मूकदर्शक बनेर यो बसिरहेको छ । यो बोलेर त्यसलाई कहिले बेहाल बनाउने हो ? थाहा छैन । मानिसहरु योसित जीवनको याचना गरिरहेका छन् । यो नै सङ्क्रमितमा पर्ने हो कि बरू !
कृष्ण आँट र उत्साहका उदाहरण थिए, गीतानगर गाउँ विकास समितिका उनी क्रियाशील सामाजिक कार्यकर्ताको रुपमा धेरै संघसंस्थाहरुमा सरिक थिए । त्यसै क्रममा उनी म प्रधानाध्यापक छँदा हिमालय दण्डपाणि माध्यमिक विद्यालयका विभिन्न समिति÷उपसमितिहरुमा पटकपटक संयोजक÷सदस्य भएर काम पनि गरे ।
उनी सबै मानिसहरुका हाइ ! हाइ ! थिए । ज्येष्ठहरुको यथोचित सम्मान गर्न जान्ने कृष्णलाई उनका अनुजहरु सधैँ पछ्याउँथे ।
मेरो एक्लो ‘इम्युनिटी’ले ३÷३ जना मधुमेह, रक्तचाप र थाइराइडसँग मल्लयुद्ध गरिरहेको स्थिति भए पनि भावनाको प्रबलता रहेकोले रिङ्टा र कमजोरीको जोखिम मोल्दै मनले भन्यो– ‘मानिसलाई शोक र विपत्तिको बेला आफन्तको साथ र सान्त्वना चाहिने हो, अरु बेला ऊ आफैँ उभिन्छ ।’ ‘हो’ भनेर अतीतले जोडदार समर्थन ग¥यो ।
अमरबस्तीदेखि तल झर्नेबित्तिकै टिल्पिल टिल्पिल पानी भरिएका रोपाइँ गर्न तम्तयार ठूल्ठूला खेतका गह्राहरुमा मेरो दृष्टिपात भयो ।
स्कुटी रोकेर गह्रामा ओर्लिऊँ ओर्लिऊँ लाग्यो, तर त्यहाँ न बीउका मुुठाहरु, न हली र गोरूहरु, न कोदालीहरु थिए, थिए भ्यागुुता र पाहाहरु आलीका डिलहरुमा, तर मेरो ओर्लिऊँ ओर्लिऊँ भएको मनले मलाई आफैँ बेचबिखन भएको खेतको ठूलो गह्रोमा हुल्यो ।
घुँडाघुँडासम्म पानी आएकोले ‘आत्मतृप्ति’ले फर्किन आदेश दियो । फर्र्किएपछि एउटा अदृश्य आवाजले ‘आज दिनभरि हिलो नपखाल’ भनेर अह्राएको आभास भयो । जान त नजिकैको चापाकलमा गोडा धुन गएँ, हिलो लेस्सिएको हुँदा मिचीमिची धुनुप¥यो, ‘आभास’ले भनेको भए पनि हुुन्थ्यो भन्ने लाग्यो ।
त्यहाँदेखि ३०० मिटर दक्षिणतिर कृष्ण हमालको घर थियो । कृष्णको तस्बिरमा माल्यार्पण गर्न र उनका शोकाकुल परिवारजनलाई समवेदना दिन भएको मेरो ‘गमन’लाई विभिन्न खालको ‘कमेन्ट’ले हिर्काउन सक्छन्– ‘तँ गाको होस् र ? तेरो भावना पो गएको हो त ! तेरो खुसीले गइस् ! पालाको पैँचोका लागि गइस् ! आफ्नो अतीतको निजी गन्थन र वर्तमानको मन्थन लेख्न गइस् ! के फकाइफकाइ, बढाइचढाइ गरीगरी लेख्छस् ! पढे पनि यसमा के गढिएला र !’
तर, आज अथवा यी शोक र संस्कारका १३ दिनहरुमा म नगएको भए मेरा श्रद्धाञ्जली र समवेदनाका भावनाहरु सदा पश्चात्तापको रापले पग्लिरहने थिए ।
जस्तै महात्मा र महान् मानिसहरु पनि एउटा न एउटा दोषको वशीभूत भएझैँ हाम्रा कृष्ण हमाल पनि धेरै गुुनहरुमध्ये एउटा बैगुनले वशीभूत थिए, अर्थात् उनको विवेकलाई यदाकदा आवेगले अल्झाइरहन्थ्यो ।
विवेकमाथि आवेगको रजाइँ भएको यो जमानामा कृष्णलाई ‘अल्झाउने’ त्यो आवेगले के हानिनोक्सानी गरेको थियो र ? थिएन, केही बाधा दिएको थिएन ।
कृष्ण ! अब तिमी मतिर ‘बीउको मुठो’ फ्याँक्दैनौ । तिमीलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली र परिवारजनमा शोकाञ्जली !
मौद्रिक नीतिबाट उत्साहित उद्योगी व्यवसायी : कोरोनाले थलिएको क्षेत्र उठ्ने विश्वास